Vavaka hivarotana trano. ? Masindahy Josefa sy Andriamanitra Pai
Ny vavaka raha hivarotra trano. Ny fandinihana ny vavaka amin'ny fangatahana sy asa rehetra atolotra isan'andro isan'andro dia tena zava-dehibe. Ka raha mila iray isika vavaka hividianana trano Tokony ho fantatsika ny fomba hikarohana ny fehezanteny marina tokony hatao.
Misy ny vavaka ho an'ny zavatra rehetra ilaintsika sy ny fivarotana trano, tsy misy isalasalana, fomba iray izay ilaintsika ny fitarihana olona ambony indrindra izay mitarika antsika handray fanapahan-kevitra tsara satria tsy tokony hoheverina ho maivana izany.
Amin'ny vavaka isika dia hahita fandriampahalemana sy fahendrena, toy izay ilaina fotsiny amin'ny fanaovana asa tsara.
1 Mivavaka mafy ve ny ivarotana ilay trano?
1.1 Ny vavaka amin'i San José hamidy trano
1.2 Ny vavaka raha hivarotra trano lafo
2 Azoko atao ve ny fehezanteny roa?
Mivavaka mafy ve ny ivarotana ilay trano?
Mahery ny vavaka, na aiza na aiza ataonao na ilay fotoana, ny vavaka dia ho fitaovam-piadiana tsara indrindra sy fitaovana ampiasaintsika hanampy antsika hahitana ireo fomba hitadiavana na dia ao amin'ireo tranga izay heverintsika fa tsy misy.
Ary tena ao anatin'ireto raharaha sarotra indrindra ireto izany izay mahery indrindra ny vavaka.
Ny fivarotana trano dia mety manana fahasahiranana sasantsasany, ilaina matetika ny amidy haingana ary somary mahaliana ny fahazoana olona tena maniry ny hividy ny fananana, amin'ireto tranga ireto dia tsy misy tsara afa-tsy ny vavaka hividianana izany amin'ny fotoana voarakitra.
Tsy misy zavatra tsy vitan'ny vavaka ary marina izany.
Raha ny mifanohitra amin'izany kosa, ny tadiavina dia ny mivarotra izany amin'ny olona manome azy ny fikarakarana homena azy, satria ny trano mihitsy no manana lanja fihetseham-po lehibe, dia vao maika lasa sarotra ny fikarohana ny mpividy.
vavaka afaka hiseho ny mpividy izay nantenaintsika, izay mifanaraka amin'ny vidiny ary manome ny fikarakarana sy fankasitrahana ny trano ilaina amin'ny fisorohana ny fahasimbany.
Ny fametrahana ny finoana rehetra ny herin'ny vavaka dia hanome hery antsika hiandry ny fahagagana ilaintsika.
Ny vavaka amin'i San José hamidy trano
Ry Mpaminany Saint Joseph, anao izay nampianarin'ny Tompontsika ny asan'ny mpanao kabinetra, ary voamarina fa napetraka tsara mandrakizay ianao, henoy ny fitakiako.
Tiako hanampy anao aho izao: Ahoana ny fomba nanampianao an'i Jesosy zanaka lahy natsangana, ary toa anao sy ny kolontsainanao sy ny fahaizanao nanampy olona maro hafa amin'ny resaka trano. Maniry ny hivarotra izany aho (trano nomena na trano) amin'ny fomba haingana sy mora ary mahasoa.
Ary miangavy anao aho mba hanao ny faniriako Hanatona mpanjifa tsara, Iza no vonona, izay mahatonga ary mendrika, Ary miarahaba ahy ianao fa tsy misy manakana ny fanatanterahana haingana ny varotra.
Ry malala, ry Joseph malala, fantatro fa hamolavola anao amin'ny fonao aho noho ny famindram-ponao sy amin'ny fotoany manontolo, fa ny fahoriako izao dia lehibe tokoa ary tsy maintsy atao maika.
Ry Masindahy Joseph, hapetraka ao anaty hazakazaka sarotra ny tenako Miaraka amin'ny lohako mitoetra ao anaty haizina Ary iaretako araka ny fandeferan'ny Tompontsika, Mandra-pahatongan'izany (ny trano na ny fananana nosafidiana) dia finiquite.
Miangavy anao izahay mba hitarika ny mpividy ilaina, mba hahafahantsika manatontosa ny fifampiraharahana miaraka amina paika ankasitrahana amin'ireo andaniny roa ary araka izay azo atao.
Avy eo, ry Saint Joseph, manao fanekem-pihavanana eo alohan'ny Tompontsika lehibe aho fa hanangona ny fankasitrahako mandrakizay ianao ary hitondra ny anaranao malefaka eo amin'ny molotro na aiza na aiza halehako.
San José no Saint izay tsy maintsy alehantsika amin'ireto tranga ireto satria izy, amin'ny mpandrafitra, dia mahafantatra ny hasarobidin'ny fananana trano amin'ny fiainantsika.
Ny firesahana aminy dia afaka manampy antsika hahita ny vahaolana efa niandry antsika, tadidio fa mahery ny vavaka ary raha toa ka, ankoatra izany, dia manao izany isika amin'ny maha-tsara azy ary mahery vaika kokoa.
Tsy afaka manatona olona masina izay misalasala ny heriny na ny fahaizany isika, fa ny mifanohitra amin'izany kosa, tokony hatoky isika ary mino fa afaka manampy antsika tsirairay hahita vahaolana amin'ny saintsika tsirairay ny tsirairay amin'izy ireo.
La vavaka ho an'i Masindahy Josefa ny mivarotra trano dia mahomby sy mahagaga.
Ny vavaka raha hivarotra trano lafo
Andriamanitra Ray, misaotra anao nitahy ahy ato amin'ity trano ity. Misaotra anao noho ny fahafinaretana azoko taminy nandritra ireo taona niainako teto. Asehoy ahy izay tokony hataoko mba hanomanana azy hamidy.
Mivavaka aho fa hivarotra haingana be ny tranoko. Tsy hanan-tahotra ao am-poko aho satria fantatro fa manana mpividy ianao mividy.
Mangataka aminao aho mba hanome ahy ny fahasoavana hanao ny marina ary tsy hamilom-bidy amin'izay zavatra angatahiko.
Fantatro fa mila mpividy fotsiny aho ary mangataka anao handefa azy haingana. Mampanantena aho fa homena anao arakaraka ny fiakarana hoentinao avy amin'ity varotra ity sy hanome voninahitra anao amin'ity orinasanao ity.
Izaho koa mivavaka ho an'ny toerana vaovao izay hitondranao ahy.
Enga anie ianao hanomana ahy hahitako fifaliana sy fiadanana lehibe ao amin'ity trano vaovao ity, amin'ny anaran'i Jesosy, ny fitiavana.
Ny vavaka hividianana varotra rehefa mivarotra trano dia tsy maintsy mivoaka amin'ny fomba madio sy marina avy ao anaty ka hatrany amin'ny olo-masina izay itodiana azy.
Izany no antony anaovana ny fanadiovana ara-batana sy ara-panahy ny trano izay tiantsika hamidy miaraka amin'ny finiavana hanaisotra ny zavatra rehetra manakana ny fifanarahana amidy.
Azoko atao ve ny fehezanteny roa?
Betsaka ny olona matahotra tsy hivavaka mihoatra ny vavaka. Amin'ity tranga ity dia aza manahy.
Afaka ary tokony hivavaka daholo vavaka tsy misy olana.
Izay vavaka mba hivarotana trano dia matanjaka ary tsy maintsy mivavaka arak'izay angatahinao.
Ny zava-dehibe dia ny mino an'Andriamanitra sy San José ianao.
Amin'izany fomba izany ihany no hanampian'ny olo-masina roa anao anao amin'ny fahasoavanao.